Xildhibaanad Samra Cumar oo beenisay in Ilaaladeeda ay dhalinyaro ku dileen Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Xildhibaanad Samra Cumar oo beenisay in Ilaaladeeda ay dhalinyaro ku dileen Muqdisho
Xildhibaanad Samra Cumar oo beenisay in Ilaaladeeda ay dhalinyaro ku dileen Muqdisho
Xildhibaanad Samra Cumar ayaa beenisay wararka sheegaya in Ilaaladeeda ay dhalinyaro ku dileen magaalada Muqdisho, xilli uu socday banaan bax ay wadeen darawalada mooto bajaajta oo ka cabanayay dhibaatooyin ay kala kulmaan ciidamada ammaanka iyo xirnaanshaha waddooyinka.
Qaar ka mid ah warbaahinta bulshada ayaa lagu qoray warar sheegaya in Ilaalada Xildhibaan Samra Cumar oo ah wasiir kuxigeenka Haweenka ay dileen rag dhalinyaro ah oo ka qeyb qaadanayay banaan baxa.
Hase ahaatee Xildhibaan Samra Cumar oo la hadadashay Warbaahinta ayaa sheegtay in wararkaas ay yihiin kuwo been abuur ah, meesha dilka uu ka dhacayna aanay iyada iyo ilaaladeeda aysan tagin.
“Waxba kama jiraan waaye ilaaladeeda wax dil ay geysteen ma jirto, meesha la sheegayana ma tagin, gaariga la sheegayana ma aanan wadin, aniga iyo istaafkeyga shaqada joognay, meesha banaan baxa uu ka dhacayna dhowr bilood ka hor ayaa igu dambeysay”ayay tiri Xildhibaan Samra.
Waxaa ay sheegtay in arrintan looga baahan yahay inay ka jawaabaan dowladda iyo laamaha amniga, ayna ka war sugeyso.
Ciidamada Booliska ayaa gacanta ku dhigay ilaaladii dilka geysatay, mana jirto wax war ah oo ka soo baxay Booliska, hase ahaatee warka ku saabsan dilka ay geysteen Ilaalada Xildhibaan Samra ayaa si aad ah isa soo tarayay, waxaana dad badan ay baraha bulshada soo dhigayeen qoraalo ay isla bar bar dhigeen dilkii Bishii May ka dhacay agagaarka Madaxtooyada oo Ilaalada Hanti dhowrka Guud ay ku dileen Wasiirkii Howlaha Guud Cabaas Siraaji.